အမေရိကန်အကြောင်း မှတ်စု ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 6:43 PM | No မှတ်ချက် |
အမေရိကန်ကို US သို့မဟုတ် USA လို့အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ nicknameက Uncle Sam (ဦးလေးဆမ်)ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့nicknameကတော့ Land of Free (လွတ်လပ်ရာမြေ) ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြည်နယ်ပေါင်း ၅ဝနဲ့ သီးခြားပြည်နယ် (Washington, D.C.) ဆိုပြီးရှိတယ်။ ပြည်နယ်တိုင်းမှာ ပြည်နယ်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကိုယ်စီရှိကြသတဲ့။ ဗဟုသုတအလိုငှာ ဖတ်မိတာလေး ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။
၁. Alabama: Yes, We Have Electricity.
Alabama ပြည်နယ်... ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ လျှပ်စစ်မီးရှိပါတယ်။
(အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တောအကျဆုံးအရပ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။)
၂. Alaska: 11,623 Eskimos Can't Be Wrong!
Alaska ပြည်နယ်.... တစ်သောင်းတစ်ထောင်ခြောက်ရာနှစ်ဆယ့်သုံး အက်စကီးမိုးလူမျိုးဆိုတာ မမှားပါဘူး။ (ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတယ် ကျွန်မ မသိပါ... အရမ်းအေးတဲ့အရပ်မို့ ထင်ပါတယ်)
၃. Arizona: But It's A Dry Heat.
Arizona ပြည်နယ်... ဒီမှာပူတဲ့အပူက ခြောက်သွေ့အပူပါ။
(ပြောစကားအရ ဒီပြည်နယ်မှာနေတဲ့ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ ပူလွန်းလို့ အပေါ်ပိုင်း ဘာမှသိပ်မဝတ်ကြဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ရောက်မှပဲ သေချာကြည့်ကြည့်ဦးမယ်း)
၄. Arkansas: Literacy Ain't Everything.
Arkansas ပြည်နယ်.... စာပေယဉ်ကျေးမှုက အရာရာကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘူး။ (စာပေယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ပြည်နယ်ဆိုပေမယ့် Arkansasက အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Bill Clintonရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိပါ)
၅. California: By 30, Our Women Have More Plastic Than Your Honda.
California ပြည်နယ်... ၃ဝနှစ်အရောက်မှာ ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးသုံးတဲ့ ပလပ်စတစ်က ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီသုံးတဲ့ပလပ်စတစ်ထက် ပိုမယ်။ (ဟော်လိဝုဒ်ရဲ့တည်နေရာ… မင်းသမီးတိုင်းလိုလို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြတယ်)
၆. Colorado: If You Don't Ski, Don't Bother.
Colorado ပြည်နယ်… စကီးမစီးတတ်ရင် လာမနှောင့်ယှက်ပါနဲ့။
၇. Connecticut: Like Massachusetts, Only The Kennedy's Don't Own It Yet.
Connecticutပြည်နယ်… မန်ဆာချူးဆက်နဲ့ မကွာပါဘူး။ ကနေဒီမိသားစု မပိုင်သေးတာလေးပါပဲ။ (နာမည်ကြီး Yale တက္ကသိုလ်က ဒီပြည်နယ်မှာရှိပါတယ်။ အချမ်းသာဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကတက္ကသိုလ်ကနေ အမေရိကန်သမ္မတငါးဦးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်)
၈. Delaware: We Really Do Like The Chemicals In Our Water.
Delaware ပြည်နယ်….. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေထဲမှာ ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်တာကို ကျွန်တော်တို့တကယ်မနှစ်သက်ပါဘူး။ (ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု အဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ရဖူးတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။ ဓာတုစက်ရုံကြီးတွေ တည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။ ဆန်ထွက်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။)
၉. Florida: Ask Us Our Grandkids.
Florida ပြည်နယ်… ငါတို့ရဲ့မြေးမြစ်အကြောင်းလေးလည်း မေးပါဦး။
(သက်ကြီးသူတို့ အပန်းဖြေ အနားယူရာမြေ၊ အငြိမ်းစားတော်တော်များများက ဒီနေရာမှာ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဘဝကို အေးအေးလူလူဖြတ်သန်းကြတယ်)
၁ဝ. Georgia: We Put The "Fun" In Fundamentalist Extremism.
Georgia ပြည်နယ်…. တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေကို ကျွန်တော်တို့က “ပျော်စရာတွေ”ထည့်ပေးတယ်။ (သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအယူကို နားမလည်လို့ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း မသိပါဘူး..)
၁၁. Hawaii: Haka Tiki Mou Sha'ami Leeki Toru (Death To Mainland Scum, But Leave Your Money)
Hawaii ပြည်နယ်…. အမေရိကန်ကုန်းမြေပေါ်က ဟိုဆန်ကုန်မြေလေးငနဲသားတွေ သေကြစမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် ငွေတွေတော့ ချန်ထားခဲ့ပေါ့။ (အပန်းဖြေရာမြေ၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ဟာဝိုင်ရီကအမျိုးသမီးတွေက လူဖြူငနဲတွေပျော်ပါးဖို့ပဲဖြစ်နေတယ်)
၁၂. Idaho: More Than Just Potatoes... Well Okay, We're Not, But The Potatoes Sure Are Real Good.
Idaho ပြည်နယ်… ဒါဟာ အာလူးကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အေးပါ.. အေးပါ… ငါတို့ဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာလူးတွေက တကယ်ကောင်းပါတယ်။ (စိုက်ပျိုးရေးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။ ရိုးစင်းတဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်)
၁၃. Illinois: Please Don't Pronounce the "S".
Illinois ပြည်နယ်… ကျေးဇူးပြုပြီး နောက်ဆုံးအသံထွက်မှာ“s” မပါပါနဲ့။ (ပြည်နယ်ရဲ့နာမည်က ပြင်သစ်ဘာသာစကားကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာ နောက်ဆုံး s ကို အသံထွက်မဖတ်ကြဘူးတဲ့။ မြန်မာတွေကတော့ ဖတ်တယ်.. လို့စ်.. ဟုတ်စ်.. အိုက်စ်တို့.. ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်းကို မသိဘူး.. grin emoticon )
၁၄. Indiana:2Billion Years Tidal Wave Free.
Indiana ပြည်နယ်…. လှိုင်းတံပိုးတွေ မမြင်ရတဲ့ပြည်နယ်။
(ဒီပြည်နယ်က Great Lakes (အိုင်ကြီးငါးအိုင်)ရဲ့တောင်ဘက်အရပ်တည့်တည့်မှာ တည်ရှိတယ်။ Great Lakes က အတ္တလန်တစ်ဒမုဒ္ဒရာရဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တယ်။ မြေပြင်ရွေ့လျားမှုကြောင့် ကုန်းတွင်းအိုင်အဖြစ် ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြည်နယ်ဟာ ပင်လယ်လှိုင်းမမြင်ရတာ နှစ်ပေါင်း ၂ဘီလီယံရှိပြီလို့ဆိုတယ်။)
၁၅. Iowa: We Do Amazing Things With Corn.
Iowa ပြည်နယ်… ပြောင်းဖူးနဲ့ ထူးဆန်းတာတွေ ငါတို့လုပ်တယ်။
(ပြောင်းဖူးထွက်ရာမြေ၊ မြင့်တက်လာတဲ့ပြောင်းဈေးနှုန်းကြောင့် ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတွေ သူဌေးဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ပြောင်းဖူးနဲ့ ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်လို့ပါပဲ။)
၁၆. Kansas: First Of The Rectangle States.
Kansas ပြည်နယ်…. လေးထောင့်သဏ္ဍာန်ပြည်နယ်ထဲမှာ ငါတို့လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပဲ။
၁၇. Kentucky: Five Million People; Fifteen Last Names.
Kentucky ပြည်နယ်… လူဦးရေပေါင်း ၅မီလီယံလောက်ရှိပြီး Last Nameက ၁၅မျိုးပဲရှိတယ်။ (ဒီပြည်နယ်က သူ့ကိုယ်သူ အမေရိကန်ရဲ့ Heart land လို့တင်စားတယ်။ အမျိုးတွေချည်းစုနေပုံရတယ်)
၁၈. Louisiana: We're Not ALL Drunk Cajun Wackos, But That's Our Tourism Campaign.
Louisiana ပြည်နယ်… ငါတို့အားလုံးက ရူးမူးတဲ့ ပြင်သစ်ရွေ့ပြောင်းမျိုးဆက်တွေတော့ မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် လှုံ့ဆော်မှုလေးတစ်ခုပါပဲ။ (ပြင်သစ်လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြည်နယ်)
၁၉. Maine: We're Really Cold, But We Have Cheap Lobster.
Maine ပြည်နယ်… ငါတို့မှာ တကယ်အေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့မှာ ဈေးနှုန်းချိုတဲ့ ပုစွန်တုပ်ကြီးတွေရှိတယ်။ (အမေရိကန်မြောက်ဖျားအကျဆုံးပြည်နယ်ထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒေသထွက် ပုစွန်တုပ်က နာမည်ကြီးတယ်။ ခြောက်ခြားရာမြေလို့လည်း ဆိုကြတယ်။ အမေရိကန်တစ္ဆေသရဲပုံပြင်ထွက်ရာမြေဖြစ်တယ်။ The Shawshank Redemption ဆိုတဲ့ဝတ္ထုက ဒီပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို ရေးထားတာလို့ဆိုတယ်။ ဒီပြည်နယ်မှာ သေဒဏ်မရှိဘူး။)
၂ဝ. Maryland: If You Can Dream It, We Can Tax It.
Maryland ပြည်နယ်… သင်တွေးမိသမျှ၊ စိတ်ကူးမိသမျှကို ကျွန်တော်တို့ အခွန်ကောက်နိုင်ပါတယ်။ (ဒီပြည်နယ်မှာ အခွန်က သိပ်မပေးရပါဘူး။ ၅%လေးပါပဲ)
၂၁. Massachusetts: Our Taxes Are Lower Than Sweden's (For Most Tax Brackets).
Massachusetts ပြည်နယ်…. ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အခွန်က ဆွီဒင်တို့ထက် နိမ့်ပါတယ်။ (New England ဒေသဖြစ်တယ်။ ဒေသခံတွေကို Yankeeလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ အမေရိကန်ရှေးရိုးအကျဆုံး ဒေသလည်းဖြစ်တယ်။ Thanksgiving အစပျိုးရာမြေဖြစ်တယ်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဌေးတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။ အခွန်အများဆုံးပေးဆောင်ရတဲ့ ပြည်နယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး တရားဝင် လိင်တူလက်ထပ်လို့ရတဲ့ အစောဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။)
၂၂.Michigan: First Line Of Defense From The Canadians.
Michigan ပြည်နယ်… ကနေဒါတွေလာတိုက်ရင် ငါတို့က ရှေ့တန်းကပဲ။ (ကနေဒါနဲ့ အနီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်)
၂၃. Minnesota: 10,000 Lakes... And 10,000,000,000,000
Minnesotaပြည်နယ်... ရေအိုင်ပေါင်း တစ်သောင်းရှိသလို ခြင်ပေါင်း ….. လည်းရှိတယ်။ (ခြင်ပေါတဲ့ ပြည်နယ်ပေါ့)
၂၄. Mississippi: Come And Feel Better Your Own State.
Mississippi ပြည်နယ်…. လာခဲ့ပါ… မင်းပြည်နယ်အပေါ် မင်းကောင်းကောင်းခံစားကြည့်ပါ။
၂၅. Missouri: Your Federal Flood Relief Tax Dollars At Work.
Missouri ပြည်နယ်… ပြည်နယ်အစိုးရဆီ မင်းဆောင်တဲ့အခွန်က မင်းကို အကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါတယ်။ (ရိုးရာမပျက် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဘေးအန္တရာယ် အမြဲသက်ရောက်တဲ့ပြည်နယ်)
နိုင်းနိုင်းစနေ (Feb. 20. 2016)